देश टुक्राउन खोज्ने सिके राउत चलचित्रमा,माइक समाएर बोल्दा बोल्दै रोए – Complete Nepali News Portal
स्वतन्त्र मधेसको एजेन्डा छाडेर राजनीतिमा लागेका जनमत पार्टीका संयोजक डा. सीके राउतको जिवनीमा आधारित चलचित्र निर्माण भएको छ । ‘डा. सीके राउतः द प्यासन’ नामक चलचित्रको टिजर बुधबार सार्वजनिक भएको छ।
चलचित्र सन्तोष साहले निर्देशन गरेका छन् भने मुख्य भूमिका परदेशी साह देखिएका छन् । चलचित्रमा द्वन्द्व निर्देशन रेवन्तविक्रम थापाले गरेका छन् ।सिके ले के भने कार्यक्रममा ?के भन्छन उनी आफ्नो चलचित्रको बारेमा ?